ONN: Oduu Gaggabaabo Olmaa Oromiyaa Hagayya 24, 2017
August 24, 2017 in Oromia
Jambo Jote : Raada Gaarree ** New ** 2017 Oromo Music by RAYA Studio ESAT Radio News August 25, 2017 – የኢሳት ራዲዮ ዜና ነሐሴ 25, 2017
WAASHINGITAN, DIISII (VOA Afaan Oromoo)— Godiina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuu keessatti weerarri dhukkuba garaa baasaa fi haqqisaa arifachisaan erga seenee torban tokko lakkofsisuu isaa jiraatonni ibsanii jiru. Sababaa dhukkuba Kanaan namoonni du’an akka jiran kana malees buufata fayyaa naannoo keessatti kanneen dhukkubsataa jiran dhibbatti laka’amu jedhu. Yeroo ammaa kanneen nama jalaa dhukkubsatte […]
Oduu gara garaa (Update 3) – Hagayya 24, 2017
Ambo, Ethiopia #OromooRevolution Hagayyaa 24/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Mogoriitti Gootichi Humni Addaa Ittisa Uummataa Dameen #Qeerransa_Mogoor galgaala kana sa’aatii 1:30 irratti bulchiinsa magaalaa Moogor Boombiidhan haleelera. Kan males jirataa magaalichaa kan ta’e Barsiisaa Hordoofaa kan jedhamu duulli laganaa akka hin milkoofnee nama adda duree ta’ee falmaa tureedha. kanuma irraa ka’uudha manni […]
Oduu gara garaa (update 1) – Hagayya 24, 2017
Oduu gara garaa gabaa laganna- Hagayya 24, 2017
OMN: Lagannaa Gabaa Guyyaa Lammaffaa, Hag 24, 2017- Oduu gara garaa